Amaahyada Ardayga ee Harooyinka Waaweyn Dulucdaada Buuxda 2022 - Kiiky Wealth
Bogga ugu weyn Harooyinka Weyn Amaahda Ardayga Dib -u -Eegid Buuxda 2022
Harooyinka Weyn Amaahda Ardayga Dib -u -Eegid Buuxda 2022
Ma isku dayeysaa inaad dib u bixiso amaahdaada ka dib markaad ka qalin jabiso dugsiga? Ama raadinta shirkad kaa caawisa arrintaas. Ha ka welwelin, Harooyinka Weyn waa hay'adda adeegga amaahda ee ardayga federaalka ee saxda ah. Akhrinta qoraalkan waxay ku siin doontaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan amaahda ardayga ee harooyinka Weyn.
Harooyinka Sare ee Harooyinka Sare waa mid ka mid ah ururo fara ku tiris ah oo ka jira Mareykanka oo mas'uul ka ah dib u bixinta amaahda ardayda. Haddii aad heshay amaah arday federaal ah si aad u dhammaysato waxbarashadaada sare ee Maraykanka.
Shirkaddu waa hay'ad dib -u -bixinta amaahda federaalka oo leh taariikh dheer oo ah adeegyo lagu qanco. Harada weyn waa wakaaladda labaad ee dib -u -bixinta amaahda oo ka duwan wakaaladaha kale, shirkaddu waxay diiwaangelisaa dhawr cabasho oo keliya kuwa wax -amaahda.
In kasta oo ay shirkaddu diiwaangelisay dhowr kiis oo dacwad ah waqtiyadii la soo dhaafay, harooyinka Weyn ayaa weli ah kuwa ugu fiican, haddii amaahda ardaydu ay tahay walaac.
Akhri si aad wax badan uga ogaato shirkadda, dhibaatooyinka suurtagalka ah ee ay la kulmaan kuwa amaahda qaata iyo sidoo kale dhowr qorshe oo dib -u -bixinta amaahda ah oo ay shirkaddu bixiso.
Kahor intaadan sii wadin, waxaad si dhakhso leh ugu dhex mari kartaa shaxda tusmada si aad u aragto waxa maqaalku ku jiro.
Dib -u -eegista Amaahda Ardayga ee Harooyinka Weyn
Great Lakes Corp waxaa la aasaasay 1967 iyada oo ah hay'ad adeeg amaah federaal ah. Fadlan ogow in shirkaddu aysan ku siin dayn. Shirkadu waxay adiga oo kaliya kaagala shaqaynaysaa sidii aad u heli lahayd amaahda ardayga oo ay ula socon lahayd habsocodkaaga maaliyadeed muddada waxbarashadaada iyo sidoo kale inay la timaaddo qorshayaasha ugu wanaagsan ee dib loogu bixin karo deyntaada waxbarashadaada ka dib.
Shirkadda waxaa lagu qiimeeyaa hay'adda dib -u -bixinta amaahda ugu wanaagsan ee Mareykanka sida ku cad xogta Ilaalinta Maaliyadeed ee Macaamilka (CFPB).
Harooyinka Weyn, oo ah wakaaladda labaad ee dib-u-bixinta amaahda ayaa cabashooyinka aad uga yar ka hesha kuwa wax-amaahda marka la barbar dhigo hay'adaha kale ee dib-u-bixinta amaahda ee Mareykanka. Shirkaddu waxay ku leedahay qiimeynta A+ Xafiiska oo ka dhigaya kan ugu wanaagsan dalka.
XIDHIIDHKA: 10 Siyaabood oo lagu Noqdo Wakiilka Saxiixa Amaah oo lagu kasbado $ 150/saac 2022
In kasta oo, ay jiraan walaacyo ku saabsan adeegyada shirkadda bilihii la soo dhaafay ka dib markii Great Lakes Corp ay heshay hay'ad kale oo u adeegta amaahda oo la yiraahdo Nelnet sanadka 2018.
Nelnet ayaa si weyn loo ogyahay inay leedahay cabasho aad u sareysa qof kasta oo amaahiya waxaana si weyn loogu tilmaamaa in adeegyada aan fiicnayn ee harooyinka waaweyni sanka soo socda qaadan karaan sanka.
Sidoo kale Akhri: naadiga sahanku wuxuu dib u eegaa sharci ama khiyaamo
Qaar ka mid ah Xaqiiqooyinka ku saabsan Harooyinka Weyn
Shirkaddu waa hay'ad u adeegta amaahda oo la shaqaysa ardayda, qalin -jabiyayaasha, waalidiinta, iyo deyn -bixiyayaasha danaha ugu wanaagsan ee dhammaan dhinacyada ay khusayso - amaahiyaha iyo amaahiyaha. Harooyinka waaweyni waxay kugu hagaan sidaad ugu adeegi lahayd amaahdaada iyada oo loo marayo qorshaha dib u bixinta ugu fiican.
Harooyinka Weyn ma go'aamiyaan shuruudaha amaahdaada. yacni ma dhigto xadka amaahda ay heli karaan ardaydu. Shirkadda kaliya waxay u shaqaysaa sidii dhexdhexaadiye si ay u dhexdhexaadiso qorshayaasha dib -u -bixinta. Shirkaddu waxay ku timaaddaa diyaaradda ka dib markay tahay inaad heshiis la gasho amaah -bixiyahaaga
Harooyinka Weyn waxay leeyihiin mid ka mid ah wakiilada daryeelka macaamiisha ugu fiican. Ma qabtaa su'aalo ku saabsan dib u bixinta daynta? Waxaad la hadli kartaa wakiilka daryeelka macaamiisha ee shirkadda si aad talo uga hesho qorshayaasha dib -u -bixinta ugu fiican marka aad ku wareersan tahay qorshaha dib -u -bixinta deynta si aad u doorato,
Shirkadu waxay leedahay aalad qorsheeyaha dib u bixinta amaahda si loo go'aamiyo habka ugu wanaagsan ee dib -u -bixinta marka la eego muddada. Intee in le'eg ayaad rabtaa inaad ku shaqeyso amaahdaada? Waa maxay habka lacag bixinta ee aad rabto inaad iska qorto? Si aad u hesho jawaabaha ugu fiican, booqo Harooyinka Weyn si aad u samayso istaraatiijiyada dib u bixinta ugu fiican
Adeegga macaamiisha ugu fiican. Shirkadda waxaa lagu qiimeeyay hay'adda amaahda ugu wanaagsan ee Mareykanka ka dib markii ay heshay qiimeynta qanacsanaanta macaamilka ee ugu sarreysa 2015.
Dib U Bixinta Deymaha Ardayga Ee Harooyinka Weyn Review
Waxaa jira dhowr siyaabood oo dib loogu bixin karo amaahda ardayga laakiin ikhtiyaarka ugu fiican ayaa had iyo jeer ahaa 'qorshaha dib u bixinta caadiga ah.' Kani waa ikhtiyaar dib -u -bixinta oo fudud halkaas oo deyn -bixiyeyaashu ay ku amaahiyaan amaahdooda muddo 10 sano ah iyagoo bixinaya boqolkiiba yar oo ah mushaharkooda bil kasta.
XIDHIIDHKA: Waa Maxay Waajibaadka Amaahda Damaanad -qaadka ah? Sida ay u Shaqeyso, Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Haddii qorshaha dib -u -bixinta caadiga ahi aanu suurtogal ahayn, waxaad dooran kartaa ikhtiyaar kale oo dib -u -bixinta oo aad dib ugu bixinayso amaahdaada muddo dheer. Amaahda ardayga waxaa la bixin karaa ilaa 30 sano. Qorshaha lacag -bixinta ee aad doorato wuxuu inta badan ku xiran yahay inta dakhli ee aad soo gasho.
Amaahiyayaasha dakhligoodu sarreeyo waxaa badanaa lagu dhiirrigeliyaa inay doortaan qorshe dib -u -bixin oo u arki doona inay dib u bixiyaan amaahdooda muddo gaaban halka kuwa amaahda qaata ee dakhligoodu yar yahay lagula talinayo inay doortaan qorshaha dib -u -bixinta caadiga ah ama qorshayaasha kale ee u arki lahaa inay adeeg amaahdooda muddo dheer.
Sidoo kale, kiisaska aad haysato sababo dhab ah oo aadan awoodin inaad u adeegto amaahdaada, waxaa lagugula talinayaa inaad dalbato dib -u -dhigis ama dulqaad.
Harooyinka Weyn waxay aqbalaan siyaabo kala duwan oo lacag -bixin ah. Amaahiyayaashu waxay ku bixin karaan amaahda iyagoo adeegsanaya onlayn, ama waxay ku bixin karaan taleefannada. Waxaad sidoo kale ku bixin kartaa boostada. Shirkaddu waxay kaloo leedahay barnaamij aad ka soo dejisan karto macruufka ama dukaanka Play. Barnaamijku waa fududahay in la isticmaalo waxaadna ku bixin kartaa barnaamijka Harooyinka Weyn.
Habka ugu wanaagsan ee dib-u-bixinta ayaa had iyo jeer ahaa habka lacag-bixinta otomaatiga ah halkaas oo qaddar go'an oo lacag ah laga gooyo akoonkaaga bangiga bil kasta muddo cayiman. Habkani waa mid weyn maxaa yeelay maahan inaad xasuusato ama iska ilowdo dib -u -bixinta.
Sidoo kale, waxaa jira faa'iidooyin kale oo lagu bixiyo habka otomaatiga ah. Markaad isqorto habka lacag-bixinta otomaatiga ah, waxaad ka badbaadin doontaa 0.25% dhimis dulsaarkaaga. Bixinta otomaatiga ah ayaa ah habka ugu wanaagsan ee loo aadi karo dadka awooda.
XIDHIIDHKA: Soo dejiso Template Warqadda Xaqiijinta Deynta Bilaashka ah & Muunadaha
Qalabka Qorsheeyaha Dib -u -bixinta
Mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee harooyinka Weyn waa aaladda qorsheeyaha dib -u -bixinta. Qalabku wuxuu kaa caawinayaa inaad aragto sida xulashooyinka dib -u -bixinta kala duwan kuu saamayn doono bil kasta iyo inta aad nooshahay. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaa hubaal ah inaad xulato istaraatiijiyadda dib -u -bixinta ugu fiican adiga oo talo ka helaya shaqaalaha khibradda u leh shirkadda.
Adeegyada xoojinta amaahda
Harooyinka Waaweyn • Adeegyada xoojinta amaahda ayaa ah astaamo kale oo weyn oo shirkadda. Shirkadu waxay leedahay qorshe aad u fiican si ay kaaga caawiso daboolida lacago badan mar haddii aad deyn ka heshay ilo kala duwan. Tilmaamahani aad buu u weyn yahay oo wuxuu isku darayaa dulsaarka kala duwan midna adiguna shirkadu kuguma dallacayso khidmad isku -darka.
Maaraynta amaahda moobilka
In kasta oo ay shirkaduhu maamulaan amaahda mobilada, waxaad maamuli kartaa koontadaada meel kasta oo adduunka ah. Shirkadda waxaa laga heli karaa taleefannadaada ama kiniiniyada waxaadna arki kartaa koontadaada iyadoo aan loo eegin meesha aad joogto. Barnaamijku wuxuu kaloo leeyahay astaamo xusuusin ah oo ku xusuusinaya inaad lacag bixiso. Tilmaamahani wuxuu u fiican yahay amaahiyeyaasha aan ku jirin qorshaha dib-u-bixinta.
Dib-u-eegista Amaahda Ardayga ee Harooyinka Weyn waxay leedahay taariikh dheer oo adeegyo aad u wanaagsan sida ay xaqiijiyeen dhowr qiimeyn. Si kastaba ha noqotee, tan iyo markii shirkadda ay heshay Nelnet 2018, dhowr sunniyo ayaa kor loo qaaday oo ku saabsan shirkadda. Waxaa hubaal ah inaan kula socodsiin doonno wixii ku saabsan Harooyinka Weyn iyo sidoo kale wakaaladaha kale ee u adeega amaahda.
Sidaan ugu wareejiyay Sweatcoin -kayga PayPal
AppLike Dib -u -eegid Buuxda: Samee Lacag aad u badan soo dejinta Barnaamijyada
13 Siyaabood oo Loogu Guuleysto Ku -Bixinta Amazon Oo Loo Helo Walxaha Lacag La'aan
10ka Siyaabood ee Ugu Fiican ee Lacag Lagu Siin Karo Dhageysiga Raadiyaha Sanadka 2022 -ka
AppLike Dib -u -Eegid Buuxda: Samee Lacag aad u badan soo dejinta Barnaamijyada 2022 -ka
Sida Loo Codsado Amaahda PPP | Habka Tallaabo-Talaabo ah
Barnaamijka Ilaalinta Paycheck (PPP) wuxuu bixiyaa deymo dulsaar yar oo laga yaabo in gebi ahaanba la cafiyo, haddii aad tahay mulkiilaha keligiis ah,…
Dib u Eegista Deynta Xorriyadda 2022: Sidee U Shaqaysaa | Khiyaano ama Sharci?
Si la mid ah shirkad kasta oo kale oo maareynta deynta ah, shirkadda maaraynta Relief Relief Debt shirkadda waxay la timaadaa sheegashada si loo dhimo,…
20 Amaah Shakhsi ahaaneed ee ugu Fiican ee Ardayda 2022
Marxalad ka mid ah nolosha qofka arday ahaan, lacag ayaa loo baahan yahay, mararka qaarkood waxaad haysataa…
Xagee Laga Helaa Amaah Soo Celinta Canshuurta 2022 | Meelaha Ugu Fiican
Amaahda hormariska ah ee soo celinta cashuurtu waa hab aad ku heli karto lacag celintaada goor hore. ila joog markaan...
Amaahda Damiinka Shakhsiyeed
Waxaa laga yaabaa inaadan helin deyntaas aad had iyo jeer codsatay sababtoo ah taariikhda deyntaada oo liidata. Ku…
10 Tillaabo oo Wax ku ool ah si aad u hesho Amaah Ganacsi 2022
Xitaa meheradaha waaweyn iyo kuwa dhisan ayaa u baahan daymo marmar ah si ay ganacsigoodu si habsami leh ugu socdo.…